वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : अपाङ्गता र समाजको दायित्व
अहिले देख्छु, उसले देब्रे हात गुमाएको रहेछ त्यो दुर्घटनामा। उपचार सकिएपछि ऊ काममा फर्कियो। एउटा हात नभएपछि उसले गर्न सक्ने काम निश्चित रुपमा केहि सीमित हुने भए, त्यसैले उसले गर्न सक्ने काम खोज्ने क्रममा कम्पनीले हाम्रो शाखामा पठाएको रहेछ।
छ महिना पहिलासम्म दुबै हात भएको मान्छे अहिले एक हातबिनै काममा फर्किनुपर्दा उसको मनमा कस्ता भावनाहरु गुज्रिरहेका होलान्, त्यो म कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दिन। निश्चित रुपमा एउटा गहिरो पिडा हुनुपर्छ उसको मनमा। तर उसको अनुहार हेर्दा त्यो बिल्कूल देखिँदैन, हँसिलो अनुहारको देखिन्छ र रमाईलो पाराले कुराकानी गर्छ। बितिसकेको समयलाई बितिसकेको समयको रुपमा सहज स्विकार गर्न र यसपछिको दिनचर्याका लागि आफूलाई तयार पार्न दत्तचित्त देखिन्छ ऊ। एक हात बिनाको नयाँ जीवनको शुरुवातमा छ ऊ र लगनतापूर्वक यसका लागि आवश्यक सीपहरु सिकिरहेछ।
मेरा मामाको एउटा खुट्टा कमजोर छ, उहाँ विशेष खाले लठ्ठी (परम्परागत बैशाखी) का भरमा उभिने र हिँड्ने गर्नुहुन्छ। सहयोगी परिवारजनका कारण उहाँलाई सघाऊ पुगेको निश्चय पनि छ, तर पनि जिन्दगीका धेरै कर्महरुमा उहाँले भोग्नुपरेका अप्ठेराहरु हामीले देखेका छौं। यसबाहेक शारीरिक अशक्ततालाई नजिकबाट देखेको थिईन मैले। अहिले छिमेकी टेबलमा काम गरिरहेको नाकातालाई देख्दा, उसले भोगिरहेको असहजतालाई देख्दा लाग्छ हामीले त्यति धेरै ध्यान नदिने कुराको कति महत्व रहेछ। कति कुरालाई हामी स्वाभाविक र आफ्नै हकको (take as granted) मान्छौं, तर हाम्रो शारीरिक स्थितिमा केहि परीवर्तन आउनसाथ सबै कुरा कति फरक हुन पुग्दा रहेछन्!
नाकाता दाहिने हात चलाउने मान्छे हो र उसले गुमाएको हात देब्रे, उसले देब्रेको सट्टा दाहिने हात गुमाऊँदा स्थिति अझ जटिल हुनसक्थ्यो भन्न पनि सकिन्छ तर देब्रे हातको दाहिने जत्तिकै महत्व रहेछ। केहि कुरा बोक्नु पर्दा दुबै हात चाहिने कुरा हामी सबैलाई बोध छ तर अरु कैयन मसिना काममा सन्तुलन मिलाउने काम झन् महत्वपूर्ण रहेछ। अहिले नाकाताले एक हातले कम्प्युटर चलाएको, एक हातले कागजात स्टिच गरेको, एक हातले कतै मेमो टाँसेको, एक हातले फोटोकपी गरेको, एक हातले कफी बनाएको, एक हातले बेन्तो (लञ्च-बक्स) खोलेको--- देख्दा म आफैंलाई समेत अप्ठेरो लाग्छ। Prosthetic arm को अंकुशले अलि-अलि सहयोग गर्छ तर आफ्नो ईच्छामा चल्ने पाँच औंला भएको स्वस्थ हातजति उपयोगी त्यो अवश्य पनि हुनसक्दैन।
यस्तोमा अरु कसैले सघाएपनि हुन्छ, तर नाकाता आफैं त्यो चाहदैन, न त उसको भलो चाहने अरु कसैले चाहन्छन्। अरुले सघाउने बढीमा केहि दिन होला, अरुले सघाएकै भरमा जिन्दगी चल्दैन; लोग्ने-स्वास्नीनै भएपनि चौबीसै घण्टा भर पर्न सकिँदैन। उसलाई आत्मनिर्भर हुन सघाउने कुनै पनि चिज किनिदिन भने कम्पनी तयार छ र गर्नुपर्ने यहि हो।
Posted by Basanta at 10:53 PM
कृष्णपक्ष March 17, 2010 at 5:57 AM
सर्वप्रथम हाम्रो समाज नै अपांग छ भन्छु म त .. उसले हेर्ने आँखा नै अपांग छ, र त अपांगप्रतिको हाम्रो नेपाली समाजको दृष्टिकोण यस्तो हेय वा विभेदकारी भएको । तर समयसंगै त्यस्तो व्यवहारमा परिवर्तनका संकेतहरु भने देखिएका छन ।
दूर्जेय चेतना March 17, 2010 at 12:40 PM
निकै मार्मिक कुरा लेख्नु भयो। म ब्यत्तीगत रुपमा उनीहरुलाई disabled भन्नु भन्दा पनि Differently abled भन्न मन पराउछु। सबै ठाउँमा यस्ता मानिसको लागी निकै होस पुर्‍याईएको हुन्छ तर जापानमा बिशेष अलि बढी।
हाम्रो समाजमा यस्तो समय आउन निकै कुर्नु पर्ला सायद। मन छुने र प्रेरणा दिने खालको सत्य घटना.. जो सबैले पठ्न आबश्यक छ।
Dhruba Panthi March 19, 2010 at 12:26 AM
अपाङ्गताको विषयमा हामीहरुले पनि गम्भीर भएरै सोँच्नुपर्ने हो, तर के गर्नु धेरै कुरा नारामुखी मात्रै देखिन्छन्। जे होस्, जापानजस्ता विकसित देशमा देखिने अपाङ्ग-अनुकूल पूर्वाधारहरुले भविष्यका लागि भए पनि आशावादी हुन चाहिँ सघाउ पुर्‍याउँछन्।
Bed Nath Pulami March 19, 2010 at 2:06 AM
अब भने ...जापान त्यसै यत्रो विकशित र अघि बढेको होइन रहेछ जस्तो लाग्यो ... त्यहाँ का हरेक .... कुरा हरु शशक्त र सबल रहेछन ....
सलुट छ ति जापानी हरु र ... त्यस्ता ग्रेट मानवीय भावना भएका ...मानवधार्मिहरुलाई ....
ametya March 20, 2010 at 8:54 PM
जापानबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरु मध्येको एक - अरुप्रतिको ब्यबहार !!! हामी अलिक स्वार्थी छौ, सधै आफ्नो बारेमा मात्र सोच्छौ । I and then We को पथमा हामी पनि लाग्ने कि ???
रमेशमोहन अधिकारी March 21, 2010 at 1:04 AM
राम्रो कुरा उठाउनुभएको छ । अपाङ्गहरूलाई स्वाभिमानपूर्वक बाँच्ने स्थिति सृजना गर्नु नै आफूलाई सबलाङ्ग ठान्नेहरूको कर्तव्य हो ।
JanuskieZ March 21, 2010 at 6:30 PM
Basanta March 24, 2010 at 12:08 AM
Chaitanya March 27, 2010 at 7:47 PM
पढ्छु भन्दाभन्दै नभ्याएको लेख आज पढें | निश्चय पनि हाम्रो समाज भौतिक हिसाबले मात्र नभएर मानबीय संस्कारका हिसाबले समेत पछि रहेछ भन्ने तथ्य तपाईंको लेखले छर्लंग परेको छ| जागरण बिस्तारै आउंदै छ, तर साँच्चिकै इमान्दारितापुर्बक कदम उठाईएको हेर्न भने निकै कुर्नुपर्ने देखिन्छ |
जतीनै चोट लागे पनी सही रहन सक्ने अनी कालांतर सम्म रही रहन सक्ने , मन
बसन्त जी साह्रै मन छुने लेख्नु भएको रहेछ हामीले थोरै भए पनि यस्तै चेतनामुलक सिर्जनाले समाजलाई झक्झकाई रहनु पर्दछ । बधाई छ ।